HCTA | Hospitality And Catering Training Academy (Daw Khin Kyi Foundation)
Hospitality and Catering Training Academy သည် ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းမှတည်ထောင်ထားသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာသင်တန်းကျောင်းဖြစ်သည်။ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများကို သင်တန်းကြေး ကင်းလွတ်ထားရှိကာ လူငယ်များအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးပေးရန်သာမက မြန်မာနိုင်ငံဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း အတွက် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်ကိုပါ ရည်ရွယ်ပါသည်။
We are teamed up asadevoted group of professionals with different backgrounds who are strongly committed toashort but yet challengeable journey of the HCTA. We put first the aim of giving hope for young people of Burma to shine in their own sparks while lighting up their community, delivering fresh starts to exercise democracy in school campus for the student who are the futures of tomorrow Burma.
HCTA သင်တန်းကျောင်းအား ယနေ့အနေအထား ရောက်ရှိလာချိန်အထိ စိတ်ဓာတ်အပြည့် ခွန်အားပြည့်ဖြင့် အစဉ်တစ်စိုက်ရင်းနှီး လုပ်ကိုင်လာခဲ့သော ဟိုတယ်လုပ်ငန်းသာမက နယ်ပယ်စုံမှ အတွေ့အကြုံရှိ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သော မြန်မာလူငယ်ထုအား ၎င်းတို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်၊ နိုင်ငံအတွင်း ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်း ရပ်တည်ချက်များဖြင့်တောက်ပလာနိုင်ရုံသာမက ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှအစပြု၍ ဒီမိုကရေစီလူ့အဖွဲ့ အစည်းစနစ်ကို အလေ့ပြု ကျင့်သုံးလာနိုင်စေရေးကိုပါ ထည့်သွင်းအကောင်အထည်ဖော်လျှက်ရှိသည်။
To help youths of Myanmar become skilled, independent, successful and well-equipped leaders in hospitality and catering industry. HCTA aims to fulfil vocational training needs nationwide and to extend training in other subjects.
	မြန်မာလူငယ်ထုအား အရည်အသွေးပြည့်ဝသော ဟိုတယ်လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ အဖြစ်သာမက လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ခေါင်းဆောင်မှုကိုပါပူးတွဲ တာဝန်ယူနိုင်စေရန်
To achieve this goal, trainees will be taken through the paths of vocational training which is based on innovative learning system and knowledge sharing within diversity of culture and cuisine from different ethnics. This aims not only to nurture their self-confidence and leadership potentials but also to build the unity and peaceful future of Burma.
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရေးစနစ် ပြန်လည်ဖော်ဆောင်ရန်.